Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile Oo Sida Fiinta Uga Qayliyey Qorshe Dawladaha Carabtu Ku Minjo Xaabinayaan Qaranimada Somaliland Oo Laga Saxeexay Xasan Sheekh Maxamud Iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Loogu Gacan-gelinaayo Federaalka Xamar | Berberatoday.com
Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile Oo Sida Fiinta Uga Qayliyey Qorshe Dawladaha Carabtu Ku Minjo Xaabinayaan Qaranimada Somaliland Oo Laga Saxeexay Xasan Sheekh Maxamud Iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Loogu Gacan-gelinaayo Federaalka Xamar
Hargeysa(Berberatoday.com)-Xildhibaan Maxamed Faarax qabile ayaa soo saaray War-murtiyeed qaylo dhaan ah, isagoo sheegay in Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud dawlaha Carabta la soo saxeexday heshiis uu ugu gacan-gelinaayo Garoonka Diyaaraddaha ee Berbera si ay saldhig Ciidan uga sameystaan, iyado ujeeda ka danbeysana uu ku micneeyey qorshe cunaqabateyn ah oo la saarayo Somaliland. Warkaa oo ay daabaceen Wargeysyada Sucuudiga Iyo Masar, waxa uu Xildhibaanku cadeeyey in qorshaha lagu minjo xaabinaayo Gooni isku taaga Somaliland ee Xasan sheikh Maxamuud iyo dawlaha carabtu wadaan uu la ogyahay Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Siilaanyo oo qorshaha hadda isna u jooga Dawladda Imaaraadka Carabta. War-murtiyeedka Xildhibaanka oo dhinacyo badan uu qaylo dhaan ugu kala diray Beesha Caalamka iyo xisbiyadda ayaa u dhigan Sidan.“2012-kii waxa si sahal ah loo furay oo xeeladaysan looga gudbiyey labada gole ee Guurtida iyo wakiiladda, dabarkii iyo Xeerkii gooni isku taaga qaranimada Somaliland. Waxana markaa lagu khiyaameeyey Somaliland gooni isku taageeda meeshii la doonaba waa loo tagi karaa. Arrinkaa waxa lagu bannaysanaayey wadahadallada Somaliland iyo Soomaliya, laga soo bilaabo xilligaa socdaalkii ugu horreeyey ee Madaxweyne Siilaanyo ku tagay Chet House 1, Chet House 2, Istanbuul 1, Istanbuul 2, Ankara 1, Ankara 2. United Carab Imaarat, Jabuuti Iyo dib u celintii kale ee Inqilaabku ka dhacay ee Turkiga, ee Madaxweyne Siilaanyo degdega uga soo noqday. Tan Imaaraadka ee Maanta ma jirin arrin la horkeenay golaha sharci dejinta ee Wakiiladda oo ah gole xaq u leh sida uu tilmaamayo qodobka 53, waa Xil iyo waajibaadka ay iska leeyihiin golaha wakiiladdu heshiiskaas lama keenin. Heshiisyo kale oo caalami ah oo la galayna lama keenini, waa laga dhursugaayey natiijadda uu iskugu biyo shuban doono wadahadallada Somaliland iyo Somaliya.
Anigoo ah Xildhibaan Maxamed Faarax qabile, kana soo jeeda gobolka Saaxil Waxaan leeyahay Beesha Caalamka ee aanu Saaxibka nahay ee mudada dheer nala soo halgantay, wixii dalka la iidinka saareyey, wixii naloo go’doominaayey, wixii naloo carqaladeynaayey gunteedii Maanta waanu haynaa, waxaanu iidinka Codsanaynaa inaad gurmad degdeg ah oo lagu samata bixinaayo qaranimada Somaliland kusoo gaadhan iyo dadka aan waxba galabsan ee la majara habaabiyey. Waxaan baaq u dirayaa dhamaan Ururada Caalamiga ah iyo Un-ka ee u dhisan hanaanka dimuquraadiyadda iyo xuquuqal insaanka inay dadka masaakiinta ah ee indhaha loo saabiyey eeggaan, waxaan xisbiyadda dalka leeyahay Waar haloo cadeeyo Umadda mawqifka Siilaanyo waynu aragnaa, Cidda la saaxib ah ee dad horjoogta ee dad daba joogo, Waar dadkiina u warama. Hadii aanu Xisbiga soo socdaa dadka dhagarta uga digin isaga iyo kan maanta dalka khiyaameeyeyba waa isku mid. Somaliland Waxa Maanta ku dhacay aamuskeedan Afweyne marka umadda aamusto wuu shakiyi jiray, Xukuumaddu aamuska Umadda may garan, rikoodhkeedii bay maskaxda ku haysataa, waxbaa u biniixay. Waxa uu yidhi abwaan Qaasim maalintii federaalka lagu dhawaaqay ” Hanqal taaga Geediga dad-yari waa u hamuun qabay, balse heerka tiradoodu noqon la hubsan doonee, ilaa miirta ay iibsadaan ma hakan doonaan, Hoggaamadda usii da’aa Wadbaa soo hanuunsaday’e”.